चार प्रजिअको सरुवा, सचिवको सरुवा, एआइजीमा बढुवा ! – Everest Dainik – News from Nepal
चार प्रजिअको सरुवा, सचिवको सरुवा, एआइजीमा बढुवा !
अनौठो : विश्वविद्यालयमा भने कडा आचारसंहिता
निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै गृह मन्त्रलायले सर्लाहीमा एकै दिन तीनजनासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेर्‍यो । मन्त्रालयले १५ कात्तिक बिहान उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई निमित्त प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसै दिन दिउँसो रौतहटका प्रजिअ उद्धवबहादुर थापालाई सर्लाहीको प्रजिअका रूपमा सरुवा गरियो । र, बेलुकीपख थापालाई रौतहटकै प्रजिअ कायम राखी उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवाललाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी तोकियो ।
मलाई जानकारी छैन : यादव
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ । अहिले भएका सरुवामा मलाई कुनै जानकारी छैन । आचारसंहितासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आयुक्त सुधीर शाहले हेर्नुहुन्छ । मैले धेरै जानकारी राख्ने गरेको छैन, त्यसैले उहाँलाई नै सोध्नुहोस् ।
(प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सल्लाहअनुसार नयाँ पत्रिकाले आयुक्त सुधीर शाहको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेको थियो, तर पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन ।)
निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइटी इन्जिनियर नियुक्तिको अनुमति नदिँदा त्रिविले यसअघि लिएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । ‘परीक्षाको सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आइटी इन्जिनियर नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमै ढिलाइ भएको छ,’ रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले भने । शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा र नियुक्तिमा अनुमति नदिँदा नियमित काम गर्नसमेत निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
आचारसंहिताकै कारण त्रिवि सेवा आयोग सदस्य पद गत ४ असारदेखि रिक्त छ । आयोग सदस्य नहुँदा उपप्राध्यापकको भर्ना प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । आयोग सदस्य नभएका कारण केही विषयको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सदस्य नियुक्त नभएपछि बढुवा हुनुपर्ने प्राध्यापकसमेत पीडामा छन् । उनीहरू बढुवा नै नभई अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।